Inguquko entsha ye Bitcoin Core ixhasa ngokupheleleyo SegWit-iidilesi - Blockchain News
EyoMdumba 20, 2018 admin
Softfork SeqWit kwenzeka kwinethiwekhi Bitcoin ngo Agasti kunyaka ophelileyo kwaye, ngokungafani hardfork, kwakungathethi ukusetyenziswa okunyanzelekileyo bonke abathathi-nxaxheba. Nangona ezilungileyo SegWit ngokoMthetho scalability, kwaye ngenxa yoko – ekunciphiseni ikhomishini, mass umntwana ayizange yenzeke, kwaye namhlanje SegWit-okwenziwe blockchain Bitcoin atyhila phezulu nje phezu 13%.
Eyona ngxaki inkulu ukuntsonkotha yokudala iidilesi SegWit ukuba “uninitiated”, kanti le meko ingundoqo ekufezekisweni ubuchwepheshe: SegWit-transactions inokwenziwa kuphela xa umthumeli umamkeli kufuneka SegWit-iidilesi.
Ipapashwe ngu- Bitcoin Core developers ukukhululwa 0.16.0 ikhowudi yenza kube lula ukwenza SegWit-iidilesi client engundoqo, Bitcoin Core. Yale, SegWit Kongezelelwa kwilayini yomyalelo kwaye ukuba isikhwama nojongano. Injineli Chaincode Lab kunye nelungu lekomiti Bitcoin Core Marco Falke waphawula ukuba indalo SegWit-iidilesi kwenzeka kwiinguqulelo yangaphambili isikhwama, kodwa inkqubo “kunokuba nzima” yaye “ikakhulu ifihliwe.” Ngoku ke iidilesi SegWit ziya kusetwa ngokungagqibekanga.
Ukwengeza, oku luguqulelo yokuqala exhasa “lweenkobe SegWit-iidilesi” – bech32 – owasungulwa ababhekisi phambili Peter Vuille and Gregory Maxwell. Xa kuthelekiswa ne bitcoins zemveli, bech32 kakhulu “isebenziseka kakuhle” yaye uxhasa ngokuzenzekelayo SegWit. Ngokutsho ku Marco Falke, yi le “le nxalenye ebangel 'umdla ukukhululwa.”
Chau uphawula ukuba ifomathi bech32 inikeza iifizi eziphantsi, kodwa uninzi izipaji musa ayiseki kuyo. Developers balindele ukuba indalo oluzenzekelayo iidilesi SegWit kuya kunceda ekunciphiseni ikhomishini. Nezinye izinto eziluyilo zijolise ekwandiseni umsebenzi wakho isipaji.
Okwangoku SegWit ixhasa inani elincinane ngokwentelekiso-nxaxheba market, kodwa inani labo aluve ezandayo. namhlanje, Phakathi kwazo kwakukho izipaji BitGo, ekhuselekileyo, Ledger, nesiliva, Samourai Wallet, GreenAddress, Bazaar livulekile, MSIG, Edge, Keepke, HitBTC, BTC.com, Kraken, ShapeShift, Bitstamp and Bitso, kwakunye neenkonzo intlawulo Bitrefill and CoinGate. Injongo ukongeza idilesi SegWit kwikota yokuqala ka 2018 sele ingxelo ngomnye zemali ezinkulu Blockchain.info, kwaye ekuqaleni February, exchange Coinbase ubhengeze ukuba kwinqanaba lokugqibela kokuvavanywa ubuchwepheshe, yaye kungekudala iza kufumaneka kubasebenzisi.
Nangona kukhululwa yangaphambili 0.15.1 yaye zijolise ekwandiseni SegWit inkxaso emibhinqweni, ababhekisi phambili zithi ukuba ukusungulwa enye i software SegWit2x wayeka ugqaliselo nemisebenzi yabo okwethutyana. Esinye sezizathu ukuba ukusungulwa ngenkxaso epheleleyo iidilesi SegWit lahlehliselwa, ngokutsho Chau, kukuba iqela efuna ukubona indlela SegWit isebenza kumsebenzi womnatha, kwaye uqiniseke ukuba akukho ku-.
Post Previous:Umlawuli Swiss liphuhlise iimfuneko ICO
Post Next:A Cryptocurrency New nje kwaphuma, Loo nto nje Bold nje Bitcoin